Ciidamada Kenya ee Baara Xeryaha Barkacayasha oo lagu eedeyay Dil iyo Kufsi – SBC
Ciidamada Kenya ee Baara Xeryaha Barkacayasha oo lagu eedeyay Dil iyo Kufsi
Hayada Xuquuqda Aadanaha aduunka ee Marka Magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo HRW ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amaanka ee howlgalada ka sameeya Deegaanada Waqooyi Bari Kenya ay tacadiyo kala duwan u geystaan Dadka Soomaaliyeed eek u dhaqan Halkaas.
Human Rights Watc waxay sheegtay in Laamaha Amaanka ee wadanka Kenya ay u geystaan Dadka Barkacayaasha ah Garaacid aan loo meel dayin iyo in loo adeegsado dano gaar ah halka qaar kalena la iska xirto sida lagu xusay warbixinta HRW.
Hayada warbixina soo saartay oo fadhigeeda uu yahay Magaalad Newyork ayaa sheegtay arimahan xuquuqda aadmiga lidiga ku ah ay biloowdeen ka dib markii ciidamada amaanka wadanka Kenya ay so galeen Xuduuda Soomaaliya Bishii October ee sannadkii tagey.
Warbixinta Human Rights waxaa lagu sheegay in Falalka foosha xun ay ka dhaceen xerada dhadhaab ee ay ku dhaqan yihiin Qaxootiga soomaaliyeed ee ugu tiro badan kuwaasi oo lagu qiyaaso in kabadan 400,000 oo kun oo qaxooti ah.
Ciidamada amaanka Dhacdooyinka ay xerada dhadhaab ka geysteen waxaa ka mid ah oo warbixinta HRW lagu xusay ka mid ah Kufsi loo geysto haweenka barakacaasyaha ee ku dhaqan xeradaas.
Ugu danbeyn waxa warbixinta Hayada Xuquuqda aadmiga aduunka ay kaga dalbaday Dowlada Kenya in ay baaritaan ku sameyso tacadiyada ay ciidamadeeda ka geystaan Xeryaha dadka so barakacay ee ku yaala xuduuda dalkeeda.